သတင်း - ခေတ်မီ ဖောက်ခွဲစက်များ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်များနှင့် အခြေခံ ဗဟုသုတများကား အဘယ်နည်း
ခေတ်မီသားဖောက်စက်များအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်များနှင့် အခြေခံအသိပညာများကား အဘယ်နည်း
ကြက်ဥကို သားဖောက်ပါ သို့မဟုတ် ချိန်ဆပါ။ အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးနောက်၊ ဥများကိုချနိုင်ပြီး ပေါက်ဖွားနိုင်ပါပြီ။ မျိုးပွားဥ၏ အပူချိန်သည် သိုလှောင်မှုအတွင်း ယေဘုယျအားဖြင့် နိမ့်ပါသည်။ ဥများဥပြီးပါက စက်အတွင်းရှိ အပူချိန်ကို လျင်မြန်စွာ ပြန်လည်ရရှိစေရန်အတွက် မပေါက်မီ 12 နာရီခန့် ကြိုတင်ပူနွေးလာစေရန် ဗန်းပါသော ကြက်ဥအကာကို မီးဖိုထဲသို့ တွန်းထည့်ရပါမည်။ ဥဥသည့်အချိန်သည် ညနေ ၄ နာရီနောက်ပိုင်းဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ဤမျှများပြားသောကြက်များပေါက်သည့်နေ့ကို အမီလိုက်နိုင်ကာ အလုပ်ပိုအဆင်ပြေသည်။ မျိုးဥထုတ်နည်းသည် မျိုးဥ၏ သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ကွဲပြားသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ဥများကို ၃ ရက်မှ ၅ ရက်လျှင် တစ်ကြိမ် ဥလေ့ရှိပြီး တစ်ကြိမ်လျှင် ကြက်ဥခွံ ၁ လုံး ချထားပါသည်။ ပေါက်ဖွားမှုသို့ဝင်ရောက်သောအခါ၊ ကြက်ဥခွံရှိ ကြက်ဥဗူးတစ်ခုစီ၏ အနေအထားများသည် တုံ့ဆိုင်းသွားသောကြောင့် "ဥအသစ်" နှင့် "ဥဟောင်း" တို့သည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အပူချိန်ကို ထိန်းညှိပေးနိုင်သည်။ လေဝင်လေထွက်ကောင်းပြီး အပူချိန်ထိန်းညှိပေးသည့် ခေတ်မီသားဥများကို တစ်ကြိမ်လျှင် ဥများဖြည့်သွင်းနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဥများကို အပိုင်းပိုင်းနှင့် အသုတ်လိုက်ထည့်နိုင်သည်။
incubator ကို စက်ပြင်ပြီး အလိုအလျောက် ပြုပြင်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်၊ စီမံခန့်ခွဲမှုသည် အလွန်ရိုးရှင်းပြီး အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများကို အဓိကအားဖြင့် အာရုံစိုက်ကာ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၏ အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို သတိပြုပါ။ ပျက်ကွက်ပါက အချိန်မီ အရေးယူဆောင်ရွက်ပါ။ incubator အတွင်းရှိစိုထိုင်းဆကိုအာရုံစိုက်ပါ။ အလိုအလျောက် စိုထိုင်းဆ ထိန်းချုပ်မှု မရှိသော မီးဖိုများတွင် ရေနွေးပူပူကို ရေဗန်းထဲသို့ နေ့စဉ် အချိန်မီ ထည့်သင့်သည်။ ရေငွေ့ပျံခြင်းကို ထိခိုက်စေသည့် ကယ်လ်စီယမ်ဆား၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် ရေထဲတွင် ဖုန်မှုန့်များနှင့် အမှုန်အမွှားများ ညစ်ညမ်းသွားဖွယ်ရှိသည်ကို သတိပြုပါ။ ၎င်းကို သန့်ရှင်းအောင်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး မကြာခဏ သန့်ရှင်းရေး သို့မဟုတ် အစားထိုးသင့်သည်။ Hygrometer ၏ ရေပိုက်တွင် ပေါင်းခံရေသာ ပါရှိသည်။ incubator ၏ပန်ကာနှင့်ကြက်ဥခွံများကို သန့်ရှင်းပြီး ဖုန်မှုန့်ကင်းစင်အောင်ထားသင့်သည်၊ သို့မဟုတ်ပါက ၎င်းသည် စက်အတွင်းရှိလေဝင်လေထွက်ကိုထိခိုက်စေပြီး ပေါက်နေသောသန္ဓေသားများကို ညစ်ညမ်းစေမည်ဖြစ်သည်။ မော်တာ အပူရှိမရှိ၊ စက်အတွင်း ပုံမှန်မဟုတ်သော အသံရှိမရှိ စသည်ဖြင့် စက်၏လည်ပတ်မှုကို အမြဲဂရုပြုသင့်သည်။ ပေါက်ဖွားသည့်အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ၊ လေဝင်လေထွက်နှင့် ဥလှည့်ခြင်းကို အကောင်းဆုံးအကွာအဝေးတွင် အမြဲထိန်းချုပ်ထားသည်။ .
3. ကြက်ဥကို ယူပါ။
သန္ဓေသားလောင်း၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို နားလည်ရန်နှင့် မျိုးမအောင်သောမျိုးဥများနှင့် သန္ဓေသားသေများကို အချိန်မီ ဖယ်ရှားနိုင်စေရန်အတွက် ပုံမှန်အားဖြင့် ပေါက်ဖွားခြင်း၏ ၇ ရက်၊ ၁၄ ရက်နှင့် ၂၁ ရက် သို့မဟုတ် ၂၂ ရက်တို့တွင် သုံးကြိမ်ပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး သန္ဓေသားကြီးထွားမှုကို စောင့်ကြည့်လေ့လာသည်။ ကြက်ဥ။ .
⑴ သန္ဓေသားဥသည် ပုံမှန်အတိုင်း ကြီးထွားလာသည်။ ဦးခေါင်းကို ရိုက်ချက်အားဖြင့် ကြက်ဥအနှစ်သည် ကျယ်ပြီး တစ်ဖက်သို့ စောင်းသွားသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။ သန္ဓေသားလောင်းသည် ပင့်ကူပုံသဏ္ဍာန်အဖြစ် ဖွံ့ဖြိုးလာကာ ၎င်းပတ်ပတ်လည်ရှိ သွေးကြောများ သိသိသာသာ ပျံ့နှံ့သွားကာ သန္ဓေသားလောင်းပေါ်ရှိ မျက်လုံးအမှတ်များကို မြင်တွေ့နိုင်သည်။ မမျိုးဥကို အနည်းငယ်လှုပ်ခါပြီး သန္ဓေသားလောင်းသည် ၎င်းနှင့်အတူ ရွေ့သွားလိမ့်မည်။ ဒုတိယဓာတ်ပုံအားဖြင့်၊ အညစ်အကြေးထုတ်ခန်း၏အပြင်ဘက်တွင် ထူထဲသောသွေးကြောများဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားပြီး ကြက်ဥ၏ဦးခေါင်းသေးသေးတွင် allantoic သွေးကြောများကို ပိတ်ထားသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဓာတ်ပုံသုံးပုံကတစ်ဆင့် သန္ဓေသားလောင်းဟာ မှောင်မိုက်သွားပြီး လေဝင်ပေါက်က ကျယ်ပြီး တစ်ဖက်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း တိမ်းစောင်းသွားကာ အနားစောင်းကို ကောက်ကောက်လိုက်ကာ လေခန်းထဲမှာ အမှောင်ရိပ်တွေ လင်းလက်လာပြီး ကြက်ဥကို ထိလိုက်တဲ့အခါ ကြက်ဥက ပူလာပါတယ်။ .
⑵ သုက်ပိုးမမျိုးဥမရှိပါ။ ဦးခေါင်းပစ်ခတ်မှုတွင် ကြက်ဥသည် အရောင်ဖျော့နေပြီး ၎င်း၏အတွင်းပိုင်း၌ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ကြက်ဥအနှစ်၏အရိပ်ကို ဖျတ်ခနဲမြင်ရပြီး သွေးကြောများကို မမြင်ရပါ။
⑶ သန္ဓေသားလောင်း ဥသေ။ သေနတ်နဲ့ပစ်ခံရတဲ့ သန္ဓေသားလောင်းတွေမှာ သေဆုံးတဲ့ သန္ဓေသားတွေမှာ သွေးကြောတွေ မရှိတော့ဘဲ မျိုးဥတွေမှာ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေက တိမ်အသင့်အတင့် စီးဆင်းနေပြီး၊ ဒါမှမဟုတ် ကျန်နေတဲ့ မျက်လုံးတွေမှာ သွေးထွက်သံယိုတွေ ရှိနေတာ ဒါမှမဟုတ် သေဆုံးနေတဲ့ သန္ဓေသားရဲ့ အရိပ်ကို မြင်နိုင်ပါတယ်။ Sanzhao တွင်တွေ့ရှိသောသေဆုံးသောသန္ဓေသားဥများတွင်လေဝင်ပေါက်ငယ်များ၊ မရှင်းလင်းသောနယ်နိမိတ်များနှင့် turbidity များပါရှိသည်။ ဥခေါင်းသေးသေးလေးရဲ့ အတွင်းက အရောင်က အနက်ရောင်မဟုတ်ပဲ ထိလိုက်တာနဲ့ အေးသွားသလို ခံစားရတယ်။
ပေါက်ဖွားသည့်နေ့ 21 ရက် သို့မဟုတ် 22 ရက်မြောက်နေ့တွင် သန္ဓေသားဥများကို သားပေါက်ဗန်း သို့မဟုတ် သားပေါက်ထဲသို့ ရွှေ့ကာ အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆကို ချိန်ညှိကာ ပေါက်ပွားရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီစေရန်။ တတိယဓာတ်ပုံကဲ့သို့ နေရာချထားမှုကို လုပ်ဆောင်သည်။
သန္ဓေသားလောင်းသည် ပုံမှန်အတိုင်း ကြီးထွားလာသောအခါ သားပေါက်များသည် ၂၃ ရက်အကြာတွင် စတင်ပေါက်ဖွားသည်။ ဤအချိန်တွင်၊ ကြက်ကလေးများကို အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေရန်အတွက် စက်အတွင်းရှိအလင်းရောင်ကို ပိတ်ထားသင့်သည်။ ပေါက်သည့်ကာလတွင် အခွံအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ အချည်းနှီးသော ဥအခွံများနှင့် အခြောက်ခံထားသော ကြက်များကို ဆက်လက် ပေါက်ပွားစေရန်အတွက် အခြောက်ခံပါ။ ယေဘူယျအားဖြင့် ကြက်များသည် 30% မှ 40% ထိ ရောက်သောအခါတွင် တစ်ကြိမ်သာ ခူးဆွတ်ကြသည်။